Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Gunyana 22, 2020
Gunyana 22, 2020
Nyanzvi dzehutano dzokurudzira kuti nyika isimbise hurongwa hwekudzivirira kupararira kwe covid-19 kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi pamwe nekufa nacho huri kudzikira. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu makumi maviri nevatatu vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwechete nezuro, sezvakaziviswa nebazi rezvehutano.
Vakambove ghavhuna weMidlands, VaJason Machaya veZanu PF, vanotongerwa kugara mujeri kwemakore mana mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita huori pakutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba mudunhu ravo.
Masangano anomirira varairidzi anoti haasi kudzokera kuzvikoro pazvinovhurwa svondo rinouya kudzamara hurumende yabvuma kutambirisa varairidzi mari inotangira pamazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica.
Vagari vekuMasvingo vochema chema nedanho rekanzuru yavo rekuvawanisa mvura kaviri pasvondo panguva iyo vanhu vari kurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti hurumende iri kuita gudziramukanwa pairi kuti musika wekutengesa mari wakaparurwa neReserve Bank of Zimbabwe musi wa 23 Chikumi uri kushanda zvakanaka zvekuti dhora renyika rave kusimba uye mitengo yezvinhu yave kudzikira.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika.